ဒူဒူကြီး: Flow metering - Orifice plate flow meter
flow meter တိုင်းမှာ advantages ဆိုတဲ့ အားသာချက်တွေရှိသလို၊ limitation ဆိုတဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေ လည်းရှိပါတယ်။ steam applications အတွက်၊ အသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့ flow meter အမျိုးအစားတွေကတော့၊ Orifice plate flow meters, Turbine flow meters (including shunt or bypass types), Variable area flow meters, Spring loaded variable area flow meters, Direct in-line variable area (DIVA) flow meter, Pilot tubes နဲ့ Vortex shedding flow meters တို့ဖြစ်ပါတယ်။
Orifice plate flow meter ကို head loss device သို့မဟုတ် differential pressure flow meter လို့ လည်းခေါါလေ့ရှိပါတယ်။ venturis နဲ့ nozzles flow meter တွေဟာလည်း၊ differential pressure flow meter တွေဖြစ်ပါတယ်။ pipeline မှဝင်လာတဲ့ fluid ကို၊ Orifice plate ဟာ restriction အနေနဲ့ တားဆီး ထားပြီး၊ restriction area ကိုဖြတ်သန်းတဲ့အခါ၊ across restriction အဝင်နဲ့အထွက်မှာ၊ pressure differential ဖြစ်ပေါါပါတယ်။
Fig. Orifice plate
Fig. Orifice plate flow meter
Bernoulli's Theorem အရ၊ pressure drop ဟာ flow rate ရဲ့ square root ဆိုတဲ့ နှစ်ထပ်ကိန်းရင်း တန်ဘိုးနဲ့ directly proportional တိုက်ရိုက်အချိုးကျတဲ့ အတွက်၊ differential pressure ကိုတိုင်းတာခြင်း ဖြင့် flow rate ကို၊ ရရှိလာပါတယ်။ differential pressure ကိုတိုင်းတာဖို့အတွက်၊ Orifice plate ရဲ့ upstream နဲ့ down steam တို့မှ၊ connection tapping ထုတ်ပြီး၊ secondary device ဖြစ်တဲ့၊ DP - differential cell သို့၊ pressure ကိုပေးပို့ပါတယ်။
Fig. Orifice plate flow meter installation
DP cell မှတဆင့် simple flow indicator ဒါမှမဟုတ်၊ temperature နဲ့ pressure data တွေကိုပါဖော် ပြပေးနိုင်တဲ့၊ flow computer သို့ပေးပို့ပါတယ်။ temperature နဲ့ pressure data တွေကိုပါဖော်ပြပေး နိုင်တဲ့၊ flow computer တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ၊ fluid ရဲ့ flow rate data သာမက density compensation data တွေကိုပါရရှိလာပါတယ်။
horizontal အနေအထားနဲ့၊ install လုပ်တဲ့အခါ၊ fluid ထဲမှာ၊ ရောနှောပါဝင်နေတတ်တဲ့ vapors တွေနဲ့ condensate တွေဟာ၊ orifice ရဲ့ upstream face မှာ၊ built up စုဖွဲ့နေတတ်ပါတယ်။ upstream surface မှ vapors နဲ့ condensate တွေကို၊ ထွက်သွားစေဖို့၊ orifice plate ရဲ့အောက်မှာ အပေါက်လေး တပေါက်ဖောက်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ correct sizing and installation ဆိုတဲ့၊ orifice plates အရွယ်အစား မှန်ကန်စွာရွေးချယ်ခြင်းနဲ့ တတ်ဆင်အသုံးပြုခြင်းအတွက်၊ standardization အနေနဲ့ ISO 5167 ကို၊ သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
orifice plate ရဲ့ အဝင်နဲ့အထွက် upstream နဲ့ downstream pressure တွေကို၊ tapping ထုတ်ပြီး၊ DP cell သို့ ပေးပို့တဲ့၊ small bore အရွယ်အစားသာရှိတဲ့၊ ပိုက်လိုင်းအသေးလေးတွေကို၊ impulse lines လို့လည်းခေါါပါတယ်။ orifice plate ရဲ့ flange မှာ upstream နဲ့ downstream pressure တွေအတွက်၊ tapping ထုတ်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ flange tapping နဲ့ impulse lines တွေကို၊ ဒေါင်လိုက် vertically အနေ အထားနဲ့ install လုပ်တဲ့အခါ၊ clogged ပိတ်ဆို့တတ်တဲ့အတွက်၊ အလျှားလိုက် horizontally အနေ အထားနဲ့သာ၊ install လုပ်သင့်ပါတယ်။ DN 50 သို့မဟုတ် JIS standard အရ 50 A လို့ခေါါတဲ့၊ (၂) လက်မအရွယ်အစားအောက် pipe တွေမှာ၊ orifice plate ကိုတတ်ပြီး၊ impulse lines ကိုဆက်သွယ်တဲ့ အခါ၊ space restrictions ကြောင့် horizontally အနေအထား ဒါမှမဟုတ် vertically အနေအထားနဲ့၊ tapping မထုတ်ပဲ၊ corner tapping ပုံစံနဲ့ ဆက်သွယ်တာမျိုးကိုလည်းတွေ့ရတတ်ပါတယ်။
orifice down stream pipe line ရဲ့ 'vena contracta' မှာ၊ contraction coefficient ကောင်းစေဖို့၊ 'upstream impulse lines diameter = 0.5 x pipe diameter on the downstream side' ဆိုတဲ့၊ သတ်မှတ်ချက်နဲ့ရွေးချယ်ရပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် upstream side မှ၊ impulse lines ရဲ့ diameter ဟာ၊ downstream side မှ၊ impulse lines diameter ရဲ့ တဝက် အရွယ်အစားသာရှိတယ်လို့၊ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
orifice plate ရဲ့ အထွက်၊ down stream line မှာဖြစ်ပေါါမယ့် flow disturbance effect ကို၊ လျှော့ချဖို့ pipe line ဟာ၊ straight အနေ နဲ့၊ ဖြောင့်တန်းစွာတတ်ဆင်ထားတဲ့ pipe line ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ straight line အနေနဲ့ ရှိရမယ့်၊ down stream pipe line ရဲ့အလျှားကို '5 X pipe diameter lenght' တနည်းအား ဖြင့် pipe diameter ရဲ့ (၅) ဆဆခန့်အလျှားရှိတဲ့၊ straight length ဖြစ်ရမယ်လို့၊ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
orifice plate diameter နဲ့ pipe diameter တို့ရဲ့၊ ဆက်သွယ်ချက်ကတော့ 'ß ratio' ဖြစ်ပြီး၊ ယေဘုယျ အားဖြင့် (0.7) ခန့်ရှိပါတယ်။ straight line အနေနဲ့ ရှိရမယ့်၊ up stream pipe line အလျှားကို၊ 'ß ratio' နဲ့ pipe diameter တို့အပေါါမူတည်ပြီး၊ ရွေးချယ်ရပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် pipe diameter ရဲ့ (၁၀) ဆခန့် အလျှား ရှိတဲ့၊ straight length အနေနဲ့ တတ်ဆင်ပါတယ်။
orifice plate flow meter တွေဟာ၊ တည်ဆောက်ပုံရိုးရှင်းပြီး၊ rugged သို့မဟုတ် strong feature အနေနဲ့ တတ်ဆင်ထားတဲ့အတွက်၊ အကြမ်းခံပါတယ်။ accuracy ကောင်းသလို၊ ဈေးနှုံးသက်သာပါတယ်။ ISO 5167 standard ကိုအတိအကျလိုက်နာပြီး၊ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ orifice plate flow meter တွေကို၊ recalibration အနေနဲ့၊ ထပ်မံဆောင်ရွက်စရာမလိုဘူးလို့လည်း၊ သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။
flow နဲ့ pressure drop တိုရဲ့ square root ဆက်သွယ်ချက်ကြောင့်၊ Orifice plate flow meter တွေမှာ၊ turn-down ratio ဟာ၊ (4:1) မှ (5:1) အထိသာရှိပါတယ်။ steam system မှာအသုံးပြုတဲ့အခါ၊ water hammer effect ကြောင့်၊ orifice plate တတ်ဆင်ထားတဲ့နေရာမှာ buckle လို့ခေါါတဲ့ loose ဖြစ်လာနိုင် ပါတယ်။ အချိန်ကြာလာတဲ့အမျှ၊ loose ဖြစ်နေတဲ့ plate ဟာ ကျွတ်ထွက်သွားပြီး၊ pipe line ကို၊ ပိတ်
အလားတူပဲ wet steam သို့မဟုတ် dirty steam တွေနဲ့၊ ထိတွေ့ပါများလာတဲ့အခါ၊ plate ရဲ့ square edges တွေမှာ၊ erode သို့မဟုတ် wear လို့ခေါါတဲ့၊ ပွန်းစားမှုတွေဖြစ်ပေါါလာပြီး၊ အချိန်ကြာလာတဲ့အမျှ၊ flow meter ရဲ့ reliability နဲ့ accuracy ကိုပါထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်။
Posted by ကိုထွန်း at 18:22